Wasiir Farah Topaz iyo Kamaal Gutale oo Airport-ka Muqdisho isku fara saari gaaray
27 March 2013 Waagacusub.com-Kamaal Dahir Gutale oo ka tirsan hoowlwadeenada Xafiiska Madaxweyne Garguurte ayaa Villa Somalia dib ugu laabtay isagoo Caro la ildaran kadib markii uu ku hungoobay inuu Dubai raaco Wasiirka Madaxtooyadda Farah Abdulkadir. Shaqaalaha Madaarka Muqdisho ayaa sheegay in Wasiir Farah Topaz iyo Kamaal Dahir isku feeri gaareen gudaha Garoonka hasse yeeshee Ciidamadda amaanka kala qabteen.
Kamaal Dahir ayaa Wasiir Farah u sheegay inuu ku qoran yahay safarka sidaas darteedna uusan laheyn awood uu ku reebo laakiin Wasiir Topaz ayaa ku adkeeystay in safarkiisu yahay mid isaga u gaara.
Madaxweyne Hassan Alasow ayaa safarkii Qatar ka reebay Kamaal Dahir wuxuuna ku yiri "Waxaad Dubai u raaceeysaa Wasiir Farah Abdulkadir ,waxaana isku arki doonaa halkaas"
Kamaal oo hadalka Madaxweynaha ku dhegan ayey filan iyo Muraala dilaac ku noqotay go-aanka Wasiir Farah Abdulkadir maxaa yeelay waa markii ugu horeeysay ee Kamaal Dahir laga reebo safar uu Madaxweynaha dibadda ugu baxay.
Sababta Kamaal Dahir loo takooray ayaa lala xiriirshay Dowladda Ethiopia oo ku eedeeysay inuu ka mid yahay Mukhaabaraadka Ereteria ee xogta Madaxtooyadda bixiya.
Si kastaba ha ahaatee wuxuu Kamaal Dahir oo boorsooyinkiisa xambaarsan dib ugu laabtay Villa Somalia